မိုက်ကရိုဖုန်းသည် Huawei သို့၎င်း၏ memory ချစ်ပ်များထောက်ပံ့မှုကိုဆိုင်းငံ့လိုက်သည် Androidsis
Micron Technology သည်အမေရိကန်မိုဘိုင်းချစ်ပ်ထုတ်လုပ်သူဖြစ်ပြီး Huawei နှင့်တရုတ်ဆက်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီတွင်ပါဝင်ပတ်သက်သည် Donald Trump ရဲ့ကက်ဘိနက်နှင့်အတူရှုပ်ထွေး.
ဤကုမ္ပဏီသည် Huawei သို့အစိတ်အပိုင်းများထောက်ပံ့ခဲ့သည်ယခုအထိ။ အမေရိကန်နှင့်ကမ္ဘာ့ဒုတိယအကြီးဆုံးစမတ်ဖုန်းကုမ္ပဏီရင်ဆိုင်နေရသောတရားရေးနှင့်စီးပွားရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များကြောင့်၎င်းသည်၎င်း၏မှတ်ဉာဏ်အပိုင်းများကိုဆက်လက်မထောက်ပံ့တော့ပါ။
အသေးစိတ်အားဖြင့် Micron သည်တရားဝင်ကြေငြာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည် Huawei သို့၎င်း၏ memory ချစ်ပ်များထောက်ပံ့မှုကိုဆိုင်းငံ့ထားသည်။ ၎င်းသည်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအစိုးရမှတရုတ်ကုမ္မဏီအားကုန်သွယ်မှုတားမြစ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီသည်။
Huawei သို့အများဆုံးချစ်ပ်များကိုထောက်ပံ့သောကုမ္ပဏီ ၁၀ ခု
ကြေငြာချက်တွင်ကုမ္ပဏီအနေဖြင့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများရှိသောအမေရိကန်ကုမ္ပဏီတစ်ခုအနေဖြင့်၎င်းသည်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနှင့်၎င်းလည်ပတ်နေသောနိုင်ငံများ၏ဥပဒေများနှင့်စည်းမျဉ်းများအားလုံးကိုလေးစားတန်ဖိုးထားကြောင်း၊ ထို့ကြောင့်၎င်းသည် အမေရိကန်အစိုးရ၏စည်းမျဉ်းများနှင့်အညီ Huawei ကိုထောက်ပံ့မှုကိုရပ်ဆိုင်းလိုက်သည်.
ထို့အပြင်ခုနှစ်, Micron သည်အဓိက module ထုတ်လုပ်သူများပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်တောင်းဆိုသည့်စာကိုလည်းပေးပို့ခဲ့သည်။Huawei နှင့်၎င်းနှင့်ဆက်နွယ်နေသောကုမ္ပဏီများသို့သို့သော် Micron memory ချစ်ပ်များ သုံး၍ မှတ်ဉာဏ်ကဒ်များသို့မဟုတ် solid state drives များကဲ့သို့သောဆက်စပ် modules များကိုတိုက်ရိုက်ဖြစ်စေသွယ်ဝိုက်။ ထောက်ပံ့ခွင့်မပြုကြောင်းသတိပြုပါ။
သို့သျောလညျး ၎င်းတားမြစ်ချက်သည် Huawei ထက် Micron ကိုပိုမိုထိခိုက်စေသည်အစိတ်အပိုင်းထုတ်လုပ်သူ၏ဘဏ္reportာရေးအစီရင်ခံစာအရ 2019 ၏ပထမနှစ်ဝက်တွင်ကုမ္ပဏီ၏ ၀ င်ငွေ၏ ၁၃% သည် Huawei မှဖြစ်သည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်, မှဒေတာ ဘလွန်းဘာ့ဂ် Foxconn, BYD, TSMC, OuFeiguang, FIH Mobile, Flextronics, SK Hynix, Broadcom, Qualcomm နှင့် Universe တို့ပါဝင်သည်။ Memory chip ထုတ်လုပ်သူတစ် ဦး တည်းသာ SK Hynix ရှိပြီးသတ္တမမြောက်အဆင့်ရှိသည်။ တစ်နည်းပြောရရင်တော့, Huroni တွင် Micron မှလွဲ၍ အခြားရွေးချယ်စရာများရှိသည်ဒါကြောင့်ဒီလွှတ်ပေးမှုကိုသင်ခံစားရမှာမဟုတ်ဘူး။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » Micron သည် Huawei သို့၎င်း၏ memory ချစ်ပ်များထောက်ပံ့မှုကိုဆိုင်းငံ့လိုက်သည်